Wararka Maanta: Arbaco, Jun 6 , 2012-Booliiska dalka Uganda oo xoojiyay Ammaanka Magaalada Kampala kaddib markii ay ku hanjabtay Al-shabaab inay Qarxinayso
Goobjoogayaal ayaa sheegay in sidoo kale gaadiidka la baarayo dadkana si aad ah loola soconayo dhaqdhqaaqooda, iyagoo sheegay in dadka lagu wargeliyay askarta inay aad ula socdaan dhaqdhaqaaqyada goobaha muhiimka ah.
Saraakiisha ciidamada ammaanka Uganda ayaa sheegay in adkeynta ammaanka ay tahay mid ku timid kaddib ay Al-shabaab sheegtay inay qorsheynayso qaraxyo waaweyn oo ay dalka Uganda ka geysato.
"Weli waxaa jira cabsi weyn oo naga haysata in qaraxyo magaaladan laga geysto," ayuu yiri goobjooge magaciisa qariyay. "Wiilasheenna waxaa u dirnay Soomaaliya si ay u caawiyaan dowladda KMG ah, balse waxaa weli waa naloo hanjabayaa."
Magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa waxaa sannadkii 2010 ka dhacay laba qarax oo waaweyn kuwaasoo ay ku dhinteen dad ka badan 70-qof oo daawanayay ciyaartii ugu dambeysay ee koobka adduunka, waxaana mas'uuliyadda weerarkaas sheegatay Al-shabaab.
"Goobaha aan ammaankooda xoojinayno waa hoteellada oo laga yaabo inay soo maraan kuwa doonaya inay dhibaatooyinka geystaan," ayaa laga soo xigtay sarkaal ka tirsan booliiska Uganda.
Sarkaalku wuxuu sheegay in sidoo kale la adkeeyay in maamulayaasha hoteellada ay sidoo kale ku wargeliyeen inay ammaanka gacan ka geystaan, isagoo xusay in sidoo kale ay adkeynayaan ammaanka goobaha muhiimka ah oo ay ka mid tahay xarunta telefishinka iyo madaxtooyada iyo saldhigyada ciidamada.
Bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray fariimo caalami ah oo uga digayay dalka Uganda inay dhici karto in Al-shabaab ay qaraxyo ka geysto, maadaama ay ciidamo kaga sugan yihiin Soomaaliya, kuwaasoo dhul badan ka qabsaday Al-shabaab.